Ajuju na Azịza: Sefor - Bijstand bij terugkeer
Ajuju na Azịza
KỌNTAKTỊ NDỊ DỊ MKPA
Selected language : Igbo (Igbo)
Ị natara iwu iji pụọ na Obodo a.
Nke a pụtara na ikwesiri ịpụ na obodo Beljiọm.
Ọtụtụ ajuju anyi ga-achọ izara gị.
Kee mgbe kwesiri na m ga-apụ na obodo ahụ?
Ebee ka m nwere ike ịga?
Kee ebe m nwere ike inweta akwụkwọ dị mkpa m ga-eji ga njem?
Kee ihe ga eme ọbụrụ na apụghị m?
Kedụ otu m ga esi akwụ ụgwọ njem m?
Kee ihe bụ ikike nwere ma m rụọ ọrụ na enweghị akwụkwọ?
Kee ihe bụ ikike m nwere?
Kee ihe m nwere ike ime?
Ọteka aka na deetị edere na ‘Akwụkwọ enyere gị iji hapụ Ngalaba’ ikwesiri ịpụ na Beljiọm
Nke kacha mkpa ma dị mfe ịkwado bụ mbula na obodo ebe isi. Ịnwekwara ike ịla na obodo ọzọ, mana ọbụrụ na ịnwere akwụkwọ nyere ikike ime nke a.
Ọ bụrụ na akwụkwọ mmata gị anọghị na aka gị iji laghachi na obodo gị, ị ga-ebụzọ gaa na embasị nke obodo gị. Ha nwere ike ịnye gị paspọtụ ma ọ bụ akwụkwọ ịnwere ike iji laghachi. Ọ bụrụ na ịnwee nsogbu ọbụla biko kpọtụrụ Ngalaba Mbughachi onwe nwere ike ịnyere gị aka.
Ọbụrụ na ịpụghị na aka nke gị ma ọ bụ na uche nke onwe gị, ndị ụwe ojii nwere ike ịkpọrọ gị. Ndị ọrụ immigrashọn nwere ike ikpọchi gị na ebe zọrọ ezọ ma ọ bụ na ebe ndị mmadu bị, ka ịnwee chere maka mbughachi gị laghachị na obodo gị ma ọ bụ na obodo ọzọ aga akwado.
Ọbụrụ na ịpụghị, onwere ike ị dabanye na iwu mgbochi mbanye. Mgbochi a pụtara na gị, ruo oge dị ka afọ 3 ruo 8, ị gaghị enwe ike ị nara akwukwọ ị ga eji abanye na ọbodo Europe ọbụla ma ọ bụ egbochie gị kpam kpam ị banye obodo Europe ọbụla. Aga e sịgnalụ gị na obodo Europụ niile.
Ị ga akwụrụ onwe gị ụgwọ njem gị, mana ọ bụrụ na nke a agaghị enwe isi, ịnwere ike ina enyemaka n'aka programmụ mbughachi onwe. Programmụ a ga enye gị
tiket ugbọelụ, onye ndu ga edu gị aga na ọdụ ụgbọelu, onwekwa isi enwere ike inye gị ego na enyemaka ndị ọzọ na obodo gị. Programmụ a bụ ndị Ụlọọrụ Ozuruùwa nke Migrashọn na Karitas Ozuruùwa na emezu ya, ọbụ Fedasil na enye ha ịwụ a.
Ị ga achọ ịrịọ ha arịrịọ ma ọ bụ ị ga achọ ozi ndị ọzọ gbasara mbughachị onwe, biko egbula oge ikpọtụrụ Fedasil: +32 800 / 32 745
Inwe kwere ike inweta onye REAB otu anyị:
Owu rụ na i chọrọ ipu na aka nke gị, ịga agwa Ndị odinani Beljiom maka ọpụpụ gị. ime nke a, ịga ewere orijinal akwụkwọ enyere gị iji hapụ Ngalaba Nnyefe ndị ụlọọrụ uwe ojii ma i gafee agbata obi a. owu rụ kwanụ na i ghafeghị agbata obi a mgbe i na apụ Beljiom, iwu wụ na ịga egosi anyị ihe gosiri na i pụrụ na obodo a (ihe di ka fòtocopi akwụkwọ mmata gị, bu stampụ ọpụpụ gị) na ụzọ faks (+32 2 274 66 13) ma obu kwanụ na ụzọ email (Bur_sefor@ibz.fgov.be ).
Iru ọla oru obodo na anabataghị ka owu na iru ọla oru na ụzọ na ezighị ezi? O nwere mgbe iwu vikitim mberede na ụlọ oru? O nwere mgbè ana akwụ highị ụgwọ, ka owu o nwere mgbe a na akwụ highị ihe ruru 9.12 euros na otu elekere?
I ka nwè kwere ike ịnara ego oru gị ma kọ sakwara mberede gị site na aka ndị Direction Générale Contrôle des Lois Sociales.
Owu rụ na egosi ezigbo ihe gosiri na i ruru oru, ndị Direction Générale Contrôle des Lois Sociales nwere ike inwe nzukọ na ndị ina arụrụ oru ka ha nwee ike kwuo gị ụgwọ ha ji gị. o ga enye kwere gị aka i ghọta usoro esi akọwa ta mberede na ụlọ oru.
Inwe kwere ike inweta àdreèsì ndị dipatimenti di iche iche na ebeorụ̣̣̣̄ weèbụ ndị Federal Public Service Social Security: www.socialsecurity.fgov.be
Enwere usoro esi atụ gharị ikpe onye mkpebi ya na agaghị ofụma gbasara iwu isi na ngalaba apụ. Akọwa sịrị usoro ndị a na odu akwụkwọ mkpebi. Onye ọka iwu gị ga akọwa gasịrị gị ihe nile gbasara ya. Owu rụ na inwe gị onye ọka iwu, inwere ike kpọọ ọgba ndị otu ebe iwu iji nweta enyemaka ndị ọka iwu (na akwụ gị ụgwọ).
Sọsọ ụfọdụ usoro ikpe nwere ikike iji atụ gharị iwu iji pụọ ngalaba. Owu rụ na i gbaa akwụkwọ nke ntụgharị iwu, ma na echekwa mkpebi ngwu cha, na okwunkụzi ndị ọrụ immigrashọn, ndị oru ọchịchị n’ebe obibi gị ga ezite akwụkwọ nno dụ nke obere oge (na ụzọ annex 35).
Ma ọbụrụ na i wetaghị akwụkwọ nno dụ nke obere oge a, iwu wụ na i ga esi na ngalaba a pụọ, tìnye kwà na i gbala akwụkwọ ntụgharị. Na ọnọdụ digasị iche iche enwere ike i gbochi ike nke ntụgharị gị. Aga akọwa siri gị ya na iwu iji pụọ ngalaba a tìnye kwà na ịga eme otu iwu siri kwuo.